Axmed Madoobe oo Baarlamaanka weydiistay in la siiyo 3 bilood oo dheeraad ah, si uu ugu soo dhiso Golaha Wasiirada – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa markii 3-aad Baarlamaanka Jubbaland weydiistay in la siiyo fursad uu ku soo magacaabo Golahiisa Wasiirada.
Madaxweynaha Jubbaland, ayaa horey Baarlamaanka u weydiistay in laba jeer dib loo dhiggo magacaabidda Golaha Wasiirada. Baarlamaanka oo xilligaa aqbalay codsiga Madaxweynaha, ayaa dib u dhigay illaa afar bilood, mudadii uu Madaxweynaha xaqa u lahaa inuu ku soo magacaabo Wasiirada.
Warqad codsi ah oo Madaxweynaha uu u soo qoray Baarlamaanka, ayaa waxaa Isniintii laga hor akhriyay kulan ay Magaalada Kismaayo ku yeesheen Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland.
Madaxweynaha, ayaa wuxuu codsigiisaan uu sabab kaga dhigay, isagoo ku mashquulsan dib u heshiisiinta beelaha Jubbooyinka iyo inuu ka shaqaynaayo horumarinta Deegaanada Maamulka Jubbaland.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland, Sheekh Cabdi Maxamed C/raxmaan, ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay Xildhibaanadu ka doodi doonto codsiga kaga yimid Madaxweyne Axmed Madoobe.
Gudoomiyaha Guddiga Habdhawrka Baarlamaanka Jubbaland, Bashiir Maxamed Colaad, ayaa Saxaafadda u sheegay in kulanka ugu horeeyo ee Baarlamaanka looga doodi doono codsiga uu soo jeediyay Madaxweynaha.